अनुहारको लागि अंगूरको बीउ तेल: समीक्षाहरू, अनुप्रयोग
हालै, ठूलो मात्रा मा फार्मेसियों को अलमारियों मा अंगूर को बीउ को तेल दिखाई दिए। अनुहारको लागि (पुनरावलोकनहरू यो पुष्टि गर्नुहोस्), हाम्रो प्यारी स्त्रीहरूले प्राय: यसलाई प्रयोग गर्दछ। र कहिलेकाहीं तिनीहरूले रोजगारी क्रीमको सट्टा प्रयोग गर्छन्। यो सानो कुरा हो: ब्रान्ड विभिन्न प्रकारबाट सही उत्पादन छनौट गर्न। उपभोक्ताहरूको टिप्पणीहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दै, हामी उनीहरूको बीचमा प्रभावकारी पत्ता लगाउने प्रयास गर्नेछौं।
यो कसरी उत्पादन गरिन्छ?
धेरै महिलाहरूले लामो समयदेखि अङ्ग्रेजीको बीउको तेलको रूपमा उत्पादन गरेका छन्। अनुहारको लागि, तिनीहरूका प्रशंसापत्रहरूले यो पुष्टि गर्छन्, यो उत्तम हेरविचार हो। र यो कुनै पनि छालाको लागि उपयुक्त छ: सुत्न र वसाको लागि। यो वनस्पति तेल उत्पादन गरिन्छ, मुख्यतः अंगूरको बीउ बाट हट निकासी द्वारा। तथापि, त्यहाँ उत्पादन गर्ने एक जटिल जटिल तरिका हो - चिसो प्रेस। यो, यसको विपरीतमा, तपाईंलाई तेलमा सबै जीवविज्ञित सक्रिय पदार्थहरू राख्न अनुमति दिन्छ। तर व्यवहारमा यो विधि धेरै नै दुर्लभ रूपमा प्रयोग गरिन्छ, किनकि यस्तो उत्पादन अनुपयुक्त छ किनभने उत्पादन उत्पादनको सानो मात्राको। अंगूरको बीउको तेलले धेरै बहुमुखीकृत पदार्थ फैटी एसिड, युवाहरूको प्राकृतिक स्रोतहरू - भिटामिन ए, सी, ई, फ्लोभोनोइड र फाइटोस्स्टोल्युलहरू छन्। यस्तो अमीर संरचनाले अनुहार र शरीरको हेरचाहको अयोग्य माध्यम बनाउँछ।
धेरै मानिसहरू प्रश्नमा रूचि राख्छन्: कसरी अङ्गुरको बीउ तेल किने ? तपाईं यसलाई एक प्रसाधन सामग्री वा किस्ता प्रसाधन सामाग्री बेचेर विशेषता पसलहरूमा किन्न सक्नुहुन्छ। केही प्रयोगकर्ताहरू निर्माताको आधिकारिक वेबसाइटहरूमा वस्तुहरू अर्डर गर्न मनपर्छ।
अनुहारको लागि अंगूरको बिरुवाको तेल प्रयोग गरेर के प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो अनुप्रयोग सरल प्रक्रिया हो। केही महिलाहरूले टिप्पणीमा उनीहरूको प्रयोगको रहस्य लुकाउँछन्। यस लेखमा हामी तिनीहरूलाई विचार गर्नेछौं। यो उत्पादनको छालामा प्रभावहरूको एक विस्तृत दायरा छ:
• नमिल्ने र यसलाई सफा गर्दछ।
• आफ्नै आफ्नै कोलागेन र एलास्टिनको उत्पादनलाई उत्प्रेरित गर्दछ;
• छालाको लोच बढाउँछ, यसलाई सुक्छ।
• सुक्खा र पिरोल्नको विरोध गर्दछ;
• रिफ्रेस र छाला माथि टोन;
• पुनःप्राप्ति प्रक्रियाहरु accelerates;
• लाइट व्हाइटिङ प्रभाव छ;
• उमेर सम्बन्धी रङगिन स्पटको उपस्थिति रोक्छ;
• फ्रिक्वेन्सी बनाइन्छ।
• चयापचय को उत्तेजित गर्दछ;
• रक्त परिसंचरण सुधार;
• जलन, कुपरोस को घटना रोक्छ;
• pores narrow;
• पसीना र खसीदार ग्रंथहरूको गतिविधिलाई सामान्य बनाउँछ;
• संवेदनशील छाला पुछिन्छ;
• यसको सुरक्षात्मक कार्य बढाउँछ।
धेरै महिलाहरु यकीन छ कि अंगूर को बीउ तेल रात को क्रीम को एक विकल्प हो। तपाईं जान्दछौ, साँझमा, प्यारी स्त्रीहरूले बिहानको तुलनामा मोटो र पोषणयुक्त क्रीम प्रयोग गर्छन्। रातको छाला पुनरुत्थानको लागि यो महत्त्वपूर्ण छ।
यस सन्दर्भमा, यस तेलले पूर्णतया दिइएको मापदण्ड पूरा गर्दछ। यसमा तेल आधारित छ, यसको संरचना एपडेमरमा सबै महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाहरूको सामान्य पाठ्यक्रमको लागि आवश्यक पोषक तत्वहरूमा धनी हुन्छ। यस अवस्थामा, धुलाई पछि साँझमा, तपाईंलाई कपास स्पंजमा सानो पैसा राख्नु र तिनीहरूको अनुहार पकाउनु पर्छ। आधे घण्टा पछि तपाईं छाला कागजको साथ छाला पट्टि भन्दा बढी हटाउन सक्नुहुनेछ। तपाईं शुद्ध रूप मा र कुनै पनि आवश्यक तेल को बूंदों को अतिरिक्त संग: क्यालेन्ड्रला, नींबू, अंगूर, मिंट र यति दुवै उत्पादन को उपयोग गर्न सक्छन्। केही महिलाहरू उनीहरूको दैनिक फेस क्रीममा सानो पैसा थप्छन्। यो पनि अनुमति छ। र तपाईं यस उत्पादनको आधारमा पोषणयुक्त छाला मास्क पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। उपयुक्त, उदाहरणका लागि, यो: 1 चम्मच तरल शहद, अङ्गुरको थोपाको तेल, एक चिकन अन्डाको अन्डा जर्नी। सबै मिश्रित, एक पानी को स्नान मा थोडा गर्मी र 20 मिनेट को लागि अनुहार राखयो।
कार्बनिक पसलबाट उत्पादन
र अब, ग्राहक प्रतिक्रियाको आधारमा, हामी धेरै कस्मेटिक कम्पनीहरु को समान उत्पादनहरु को सबै पेशेवरहरु र विपक्ष को पहिचान गर्न को प्रयास गर्नेछौं। पहिलो रेखा अर्गनिक पसल तेल हो। यो पूर्णतया खुलासा मा अंगूर को पत्थर उपयोगी छ। उत्पादनमा पर्यावरण प्रमाणपत्रहरू छन्। विशेष गरी यो के हो जुन यो रूसमा उत्पादन गरिएको छ। निर्माताले घोषणा गर्दछ कि यो तेल सुत्ने, चिसो छाला, र कालो बिन्दुहरूसँग चिकनका लागि उत्कृष्ट छ। यो उत्पादनमा अङ्गुरको हल्का, सुखद सुगन्ध छ, यो तालुको छेउमा बिना राम्ररी अवशोषित हुन्छ। यसको आवेदन को प्रभाव लगभग तुरुन्तै उल्लेखनीय छ - प्रयोगको शुरुवात पछि केहि दिन पछि। प्रयोगकर्ताले रिलीज फारमको सुविधालाई ध्यान दिए: एक पाइपलेटको साथ एक गिलास छाती। थप प्लस - कम मूल्य। लागत 203 rubles हो।
Aspera तेल: ग्राहक समीक्षा
तर यो एक सस्तो विकल्प हो। यो एक कस्मेटिक तेल "एस्पर" जस्ता उत्पादन हो। यसमा अंगूरको बीउ, जाहिरा, थोडा। यो लगभग 70 rubles खर्च गर्दछ। निर्माता पनि रूस हो। उपभोक्ता उपभोक्तालाई सुन्नुहोस्। तिनीहरूमध्ये धेरै कुरा सुनिश्चित छन् कि एक राम्रो उत्पादन सस्तो हुन सक्दैन। र यो टिप्पणी उचित छ। खरीदारहरू तथ्यबाट भ्रमित हुन्छन् कि शिक्षा निर्देशन भन्छन् कि उपाय गर्म निष्कर्षण विधिद्वारा उत्पादन गरिन्छ। र यसको अर्थ छ कि त्यहाँ यति धेरै उपयोगी पदार्थहरू छैनन्। केही महिलाहरूले यसलाई प्रयोग गर्न असुविधाबारे शिकायत गर्छन्। यो अँध्यारो गिलासको बोतलहरूमा महसुस गरिन्छ, कसले प्लास्टिकको स्टपरको साथ बन्द गरिरहेको छ, जो खोल्न धेरै समस्याग्रस्त छ। यसको अतिरिक्त, उत्पादन एक पिपेट वा डिस्पेंसर संग सुसज्जित छैन। यसैले, यसको अर्थशास्त्र पनि, भन्न सकिँदैन।
एक आयात गरिएको उत्पादन छान्नुहोस्
यो इटालियन फेसन ब्रान्ड Argital को उत्पादन हो। निर्माताले आश्वासन दिन्छ कि अनुहारको लागि यो अंगको बीउ उत्तम छ। ग्राहक अनुमोदन यो पुष्टि गर्दछ। महिलाहरु लेख्दछन् कि यो एक धेरै हल्का बनावट छ, पुरा तरिकाले अवशोषित गर्दछ, पोर्सहरू क्लोग गर्दैन। केही उपभोक्ताहरूले यसलाई ब्ल्याक स्पटबाट छुटकारा पाउन सल्लाह दिएका छन्: अनुहारको अनुहारमा अनुहारको छालोमा तेल लगाउनुहोस्, आधा घण्टा धोने र अनुहारसँग राम्रोसँग अनुहार पछाडि। यस पछि, तपाईं कुनै परिचित नमिलीउजर लागू गर्न सक्नुहुनेछ। यो प्रक्रियाले चाँडै हास्येडहरू हटाउन मद्दत गर्दछ र जलन हटाउँछ। त्यहाँ एक उत्पादन मात्र एक महत्त्वपूर्ण खरिद हो - मूल्य। यसको लागत 1850 rubles हो। तपाईं यसलाई हरेक फार्मेसीमा खरीद गर्न सक्नुहुन्न।
तेल "Nikitsky बगैचा" - एक बजेट विकल्प
याल्टा शहरबाट कमान्डर निर्माताले आफ्नो उत्पादन "नाइकिस्की गार्डन" भनिन्छ। अंगूरको बीउबाट यो तेल ग्राहक समीक्षाहरू यो पुष्टि गर्दछ, हाम्रा महिलाहरु बीचको ठूलो मांगमा। यो सबको सबैभन्दा बजेट विकल्प हो, यहाँ प्रस्तुत छ। यसको मूल्य फरक औषधिहरुमा 60 देखि 80 रूबल सम्म भिन्न हुन्छ। यसको उत्पादनमा प्रयोग गरिएको कच्चा माल Crimea मा बढेको छ। सम्भवतः यो यसले आफ्नो कम लागतलाई असर गर्छ। प्रयोगकर्ताले पहिले नै यो उत्पादन रेट गरेका छन्। महिलाहरू लेख्छन् कि यो विशेष गरी रातको लागि प्रयोग गर्न राम्रो छ, अनुहारको तेल सँग अनुहार रगत। यो छिटो बिना चिसो फिल्म छोड्न को लागी अवशोषित हुन्छ। यस्तो प्रक्रिया पछि बिहान छाला निविदा र चिकनी हुन्छ। दैनिक प्रयोगको लागि उत्कृष्ट तेल। केवल एक खरिद हाम्रो ग्राहकहरू उजुरी हो - यो प्राप्त गर्न गाह्रो छ।
कम्पनी "लेकस" उत्पादन
हामी घरको निर्मातामा फर्किनेछौं। सबै पछि, नियमको रूपमा, यसको सामानको मूल्य आयातित व्यक्तिहरूको भन्दा कम छ। यो बयान यो उत्पादनमा लागू हुन्छ। फर्म "लेकस" बाट "अंगूरको बीउ को प्रसाधन सामग्री" को बारेमा समीक्षा गर्न सुन्नुहोस्। महिलाहरु लेख्दछन् कि यो छालालाई राम्ररी सुचारु बनाउँछ, हल्का स्थिरता छ। त्यसोभए, तिनीहरू मध्ये केहि दिन को प्रयोग दिन को लागी मेकअप अप क्रीम को बदले। यो आवश्यक छ कि कागज नापिनको साथ आधा घन्टा पछि अनुप्रयोगको लागी गीला प्राप्त गर्न। अब अनुहार छाला नमी र निलो छ, टोनल र पाउडर प्रयोग गर्न तयार छ। अझै पनि, प्रयोगकर्ताहरूले यस तथ्यलाई ध्यान दिन्छन् कि उत्पादनमा एक सुखद ताजा सुगंध छ, एक सुविधाजनक रूपमा बनाइएको छ: एक काँचको बोतलको साथ छेदको साथ। अनि, निस्सन्देह, मूल्य खुशी छ - 65 rubles।
माथिको सबै ध्यान दिँदै, यो निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ कि धेरै महिलाहरू सामान्य क्रीमको सट्टा अंगूरको तेल प्रयोग गर्छन्। तिनीहरूका समीक्षाहरू भन्छन कि यो सुकेको छाला र तेल छालाको लागि उपयुक्त छ। यो उत्पादन छनौट गर्ने बेला, यो प्राप्त भएको बाटोमा ध्यान दिन योग्य रहेको छ। चिसो थिचाउने विधि सबैभन्दा मनपर्दो हो। छनौटको अर्को मापदण्डको उत्पादन हो। उत्पादको साथ बोतल एक पिपेट, एक छेद वा डिस्पेंसर संग सुसज्जित हुनुपर्छ। अन्यथा, प्रयोग गरेर यो सानो खुशी हुनेछ। समान उत्पादनहरू उत्पादन गर्ने आयात ब्रान्डहरूमा, यो फर्म Argital हाइलाइट गर्न लायक छ। हाम्रो बीच, तेलका लागि घरेलू, विशेष मांग "निकिट्की गार्डन" र "लेकस"। तिनीहरू पनि प्रस्तुत रकमको लाइनमा सस्तो हुन्।
हामीले कस्मेटिक उत्पादन - अंगूरको तेलको तेल उत्पादन गर्ने सबैभन्दा लोकप्रिय ब्रान्डहरूको अवलोकन गरेका छौं।
चमत्कारी mesotherapy: प्रभाव र जटिलताहरू
Colloidal scars - छाला दोष वा आनुवंशिक विकार?
शरीर को लागि लोशन मइस्चराइजर, विशेष गरी आवेदन, दृश्य र समीक्षा
Cosmetology - यो ... कायाकल्प र शरीर रिकभरी: प्रकार, विधि र उपकरण
मुद्रांकन पलिश - यो
वार्षिक घन्टी के हो? विस्तृत विश्लेषण
प्रसिद्ध अनलाइन स्टोर मा किनमेल गर्न रकम फिर्ता अब एक वास्तविकता भएको छ
क्लिनिक "बाल स्वास्थ्य", बर्नाउल फोटो र समीक्षा